musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Isle yevakafa inowana mamirioni 1.3
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Port Arthur Historic Site Management Authority (PAHSMA) yapedza danho rekupedzisira reprojekti yakakosha yekudzora zvinokanganisa vashanyi uye kugadzirisa kupinda kune yakakurumbira Isle yevakafa uko kushanya kwemakuva kuri kwakakurumbira.
Isle of the Dead, yakarara mumvura dzeMason Cove, ndiyo yaive nzvimbo huru yekuviga chiteshi chechiteshi chePort Arthur pakati pa1833 na1877.
Zvinofungidzirwa kuti vasungwa vanodarika mazana masere vakasanganisirwa pachitsuwa ichi, kunyanya mumakuva asina kunyorwa.
Nhasi, vashanyi kuchitsuwa ichi vachiri kuona zviyeuchidzo zvakavezwa zvinoratidza makuva evashandi vemauto, vakuru vakasununguka, vakadzi nevana.
Tourism ye Isle of the Dead yakakura pamwe nekuvandudzwa kwemasevhisi uye zvivakwa sezvakawedzerwa zvirongwa zvekuchengetedza zvakaitwa kuchengetedza chitsuwa nezvisaririra zvacho. Iyo UNESCO World Heritage saiti uye inodzivirirwa pasi peAustralia nyika nemitemo yemubatanidzwa.
PAHSMA Conservation Manager, Pamela Hubert, akati: “Chirongwa ichi chinopa kuenderera pamusoro pemigwagwa yepasi nenhevedzano yemapuratifomu ayo achasimudzira nzvimbo dzinozivikanwa dzeIsle of the Dead Cemetery. "Chirongwa ichi chakagadzirwa zvine hungwaru kuti chisazokanganisa zvakanyanya nzvimbo dzekuviga, mamiriro enzvimbo uye maonero echitsuwa ichi."
"Chirongwa ichi chakanyatsorongwa uye chakaitwa mumatanho mashanu kuona kuti basa rinogona kuitwa pachiri kubvumidzwa kupinda kuchitsuwa ichi kwenguva zhinji yemushanyi," vakadaro Mai Hubert.
Ichi chirongwa chakatanga mu2016, nechinangwa chekudzora kukanganisa kwenzvimbo dzemakuva, kugadzirisa kuwanikwa, nekusimudzira ruzivo rwevaenzi. Chikamu chekutanga cheprojekti chakagoneswa nemubhadharo wemadhora makumi masere ezviuru kubva kuhurongwa hweCommonwealth Hurumende Inodzivirira Nhoroondo Dzenhoroondo.
PAHSMA yakabatana neboka remakambani eTasmanian uye vanachipangamazano vaive nebasa rakasiyana-siyana rebasa: Sue Nzvimbo Diki mukugadzira nzira dzekufamba, Pitt naSherry yezano rehunyanzvi hwekuvaka, Saunders neWard yekugadzira simbi uye kuisirwa panzvimbo, uye Hasha Kuputira uye Kupenda kwehunyanzvi pendi kupera. Kushanda naOsborne Aviation, PAHSMA yave ichikwanisa kushandisa maherikoputa kusimudzira zvinhu kuchitsuwa icho chakakurumidzisa chirongwa ichi.
“Nzira idzva dzekufamba hadzi kungowedzera kugona kuwanikwa nekutsiva masitepisi nemakombi, zvakare dzinovandudza ruzivo rwevashanyi nemapuratifomu ekuona zviri nani uye kuunganidza nzvimbo dzekushanya. Zvakakosha kubvuma kuti chitsuwa ichi ichiri nzvimbo yekuzorora yevanhu vangangosvika chiuru uye chirongwa ichi chinoratidza kuramba tichiremekedza chitsuwa ichi semakuva uye senzvimbo yekuratidzira, ”akadaro PAHSMA Archaeology Manager Dr. David Roe.
Port Arthur Historic Site, pamwe neCascades Female Factory Historic Site, Coal Mines Historic Site, Darlington Probation Station paMaria Island, uye Brickendon neWoolmers Estates, dzinoverengera nzvimbo shanu pane gumi nerimwe anosanganisira Australian Convict Sites World Heritage Property.
"Ichi chiitiko chakakosha mukuchengetedza kweIsle of the Dead," vakadaro Mai Hubert. "Tiri kufara kupedzisa chirongwa ichi uye pamwe nekuvandudzwa kweNhoroondo uye Dudziro Center kuCascades Female Factory kuvhura kutanga kwa2022, zvinoratidza kuzvipira kwePAHSMA kuverengera nyaya dzinogombedzera dzenhoroondo yedu yevasungwa veAustralia."
Isle of the Dead ndiyo kwaiendwa kune vese vakafa mukati memisasa yevasungwa. Icho chitsuwa chidiki chiri padhuze nePort Arthur, Tasmania, Ositireriya. Kutevera kupera kwenzvimbo yekugara kwePort Arthur muna 1877, kumakuva kwakavharwa, uye chitsuwa chakatengeswa senzvimbo yega. Kubva ipapo yatangwazve uye inotarisirwa nehurumende yeTasmania.